Mashanga anoora iimwe nzira inoshanda here?|Haishu
200 makore ekudzikisira kwemaminetsi makumi maviri chete ekushandisa paavhareji.Mashanga chinhu chidiki chinoshandiswa zvakanyanya mukudyara.Icho chinhu chakagadzirwa muMesopotamia icho zvisinei chinotyisidzira ramangwana nhasi.Kufanana nekotoni swabs, mashanga anongoshandiswa chete mapurasitiki zvigadzirwa.Kana zvinhu izvi zvingaita sezvisina basa kwauri, zvinomiririra 70% yemarara inosvibisa makungwa.IEuropean Union yakaita chibvumirano chezvematongerwo enyika kubvisa mashanga epurasitiki ne 2021. Zvisinei, kuzvipira uku hakugadziri zvakakwana nyaya yepurasitiki.Tingatanga sei kuchinja muupenyu hwedu hwezuva nezuva?Iwe uchawana mune ino chinyorwa zvikonzero nei uchichinjira kunemashanga anoorainyaya yakakosha.
Mashanga ekutanga munhoroondo
Kushandiswa kweshanga, shure kwezvose, kunyanya nyore.Itsvimbo yecylindrical yakabayiwa pakati payo kusvika kumativi ose.Vanhu vakaishandisa kunwa mvura kubva panguva yevaSumeri muMesopotamia.Mashanga ekutanga munhoroondo akatanga kuwanikwa mumireniyamu yechina BC.Muenzaniso wekare wezvakafanana nemashanga edu azvino uno unowanikwa muGuta rekare rekuSumer reUri.Huswa hunowanikwa muguva remunhu mukuru weSosaiti yeSumerian, Mambokadzi Puabi.
Sei mashanga aine zita iri?
Munguva yekushanduka-shanduka, mashanga anotora fomu yakasiyana zvachose.Muzana remakore rechi19, varume vaishandisa mashanga erye kusveta mvura kubva muchinwiwa chavo.Zvirokwazvo, panguva iyoyo mashanga akanga ari nyore kuwana, akanga asingadhuri, akanga asingamiri zvakakwana uye asingapindi mvura kuti aite basa rawo.Dzinde racho rinongotora zita remashanga nekuti varume vanongorishandisa kunwa.Kuti uwane zvimwe, waifanira kungotoramashanga kubva munzeve dzavo.
mashanga anoraswa anogona kuraswa
Semashanga egorosi, zvimwe zvinhu zvinogadzira mashanga anogona kushandiswa kamwe chete.Iyi ndiyo nyaya, semuenzaniso, yemashanga akagadzirwanzimbe, mashanga akagadzirwa pasta, bepa, kadhibhodhi or sadza rinodyiwa.Kana iyo yekupedzisira iine yekutamba, inonyanya kupikisa mashanga ePLA.
PLA biodegradable mashanga
PLA biodegradable mashanga anogonawo kuita compostable.PLA ibio-polymer yakagadzirwa nearoyi yemhando dzakasiyana dzekudyara, kunyanya chibage starch.Iyo isitashi inogona kudzokororwa nyore nyore uye 100% biodegradable zvinhu izvo zvine hutano kune nharaunda.Zvese nezve PLA mashanga zviri nani kune nharaunda kusvika pakugadzirwa kwayo, iyo inoburitsa mashoma egreenhouse magasi pane kugadzirwa kwehuswa mumaindasitiri.
Mhando yePLA biodegradable shwanga yatinopa, semuenzaniso, yakaoma uye inochinjika.Haina kunhuwa uye inopesana nekupisa kwakadzika.Mashanga edu ePLA anowanikwa muhukuru hwakasiyana, maumbirwo uye anogona kutoratidza marogo.Izvi zvinoita kuti PLA yedu yemashanga modhi ikwanewo kune maindasitiri composting.